ISIQITHI SEKHITSHI ESINKI (ISIKHOKELO SOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Isiqithi seKhitshi esinki (Isikhokelo soYilo)
Isiqithi seKhitshi esinki (Isikhokelo soYilo)
Nasi isikhokelo sethu kwisiqithi sekhitshi esinki kubandakanya ukubekwa, ubukhulu, iindleko kunye nemibono yoyilo eyaziwayo.
Ngaba ukhona umpheki emhlabeni owayenganqweneli enye indawo yokulwa? Mhlawumbi akunjalo. Yiloo nto esinye isiqithi sekhitshi sithandwa kangaka.
Isiqithi esisiseko sekhitshi sibonelela ngendawo yokulungiselela ukutya kwakho ngaphambi kokupheka kwaye songeze isitoreji esingaphantsi kwekhawuntareli kwikhondo lekhitshi lakho. Kodwa kutheni uyeka kwisiseko?
Ukuhamba umgama ongezelelweyo kulungiso lwakho lwasekhaya, ukuyila kwakhona, okanye ulwakhiwo, cinga ukufaka isink kwisiqithi sasekhitshini.
Izipho zeminyaka eyi-10 zomyeni
Ngaba kufanelekile ukuba ubeke iSink kwisiqithi saseKitchen?
Ubungakanani beKhitshi kwiSinki
Iindleko zesiQithi seKhitshi esinki
Isiqithi seKhitshi kunye neCooktop kunye neSink
Isiqithi seKhitshi kunye neSitofu kunye neSink
Isiqithi seKhitshi kunye neSink yokuPheka
Isiqithi sangaphandle seKhitshi esinki
Isiqithi seKhitshi kunye neSinkhouse Farming
Ukufaka isinki yakho kwisiqithi sekhitshi endaweni yokubeka kwindawo ephambili esekhompyutheni yindlela entsha yoyilo ekhitshini. Ngaphambi kokuba ulungele ukutsiba kwi-bandwagon, zibuze le mibuzo ukumisela ukuba isinki yesiqithi sekhitshi ikulungele na.
Kuqala, ufuna ukujonga ntoni ngelixa usenza imisebenzi yasekhitshini eqhelekileyo? Ukuhlamba izitya kuyadika. Kwiikhitshi ezininzi, isinki ijongene nodonga, ikunika idosi ephindiweyo yokudika. Ngaba kuyamangalisa ukuba izitya ziyafumba?
Ukutshintsha indawo yesinki kwi-countertop ephambili akuyi kucoca izitya zakho ngomlingo. Nangona kunjalo, kuxhomekeke ekubekweni nasekuqhelisweni kwekhitshi lakho, ukubeka isinki kwesi siqithi kunokukuvumela ukuba ubone ngefestile, okanye kwamanye amagumbi kunye neendawo zekhaya lakho. Ukuhlamba izitya kunomtsalane ngakumbi xa unento onomdla wokuyijonga ngelixa usenza.
Okulandelayo, yintoni injongo yesiqithi sekhitshi? Ukuba unethemba lokuba abantwana bakho abakwiminyaka yokuya esikolweni baya kuwenza umsebenzi wabo wasekhaya apho, qinisekisa ukuba banendawo yokuhlala kude kakhulu ne-splash zone, ukukhusela nawaphi na amaphepha kunye nezinto zombane kumonakalo wamanzi onokubakho.
Ukuba ufuna ukukhuthaza iqabane lakho ukuba lincedise ngakumbi ekhitshini, isinki eyongezelelweyo yokulungiselela kwisiqithi inokuhamba indlela ende ekupheliseni uxinzelelo kunye nokunciphisa ukungqubana.
Okokugqibela, kufuneka usebenzise isithuba esingakanani? Funda ngakumbi malunga iintlobo zeendlela zekhitshi Apha.
Ubungakanani obuqhelekileyo besiqithi sekhitshi zihlala ziinyawo ezimbini ngeenyawo ezine. Iziqithi zasekhitshini azikaze zinconyelwe ukuba ikhitshi lakho lingaphantsi kweenyawo ezili-13 ububanzi.
Isithuba esiphakathi kwesiqithi sakho sasekhitshini kunye ne-countertop ejongene nayo kufuneka ubuncinci sibe ngama-36, kodwa ke sibe ngu-42-45. Oku kuvumela ukuhamba ngokukhululekileyo xa kukho iimbiza neepani.
Ukulungiselela isinki, isiqithi kuya kufuneka ukuba sibe ziimitha ezisixhenxe ubude. Xa ucwangcisa isinki, iingcali zicebisa ukuba ugcine 'indawo yokumisa' kumacala omabini - indawo yokubeka ukutya okanye izinto zokupheka.
Ngokufanelekileyo, uya kuba ne-18 yekhawuntari engaphazanyiswanga kwicala elinye lesinki, kunye ne-24 kwelinye.
Elinye icala elibalulekileyo ekufuneka ulithathele ingqalelo xa ufaka isinki kwisiqithi sakho sasekhitshini kukuphakama kobude.
Izinto zokubala ezisemgangathweni zii-intshi ezingama-36 ukuphakama, kwaye isinki yomndilili ziisentimitha ezisibhozo ubunzulu, ke ezantsi isinki yakho imalunga nee-intshi ezingama-28 emhlabeni. Oku kufanelekile kubantu abaninzi.
Kodwa ukuba isiqithi sakho sekhitshi sasenziwe ngokuzonwabisa okanye Indawo yokuhlala isidlo sakusasa engqondweni, inokuba yinde - ama-42 akumgangatho olingeneyo. Kolu hlengahlengiso, i-avareji yesinki esezantsi iya kuba malunga ne-34 emhlabeni.
Ukuba unabantwana abancinci okanye bakwicala elifutshane lobude obuphakathi, oku kunokuba kukude ngokungathandekiyo kwaye kukwenze ungakhululeki ukuhlamba izitya.
Kwelinye icala, ukuba umde kunomndilili, ngekhe ufune ukubuyela kwisink yokuphakama komgangatho kwakhona. Funda ngakumbi malunga Izikhokelo zesisiqithi sekhitshi Apha.
Isinki inokuthengwa ngexabiso eliphantsi- iimodeli ezisisiseko ziqala malunga ne-200 yeedola kwaye iindleko eziphakathi kwisinki yi- $ 400 ethi, xa ujonga ubungakanani bokusetyenziswa kwayo, isengqiqweni.
Oko bekutshiwo, isinki kufuneka idityaniswe namanzi, kwaye ngenxa yoko, uyakufuna iplamba.
Abatywini ngamanye amaxesha bahlawulisa ngeyure, ngeendleko zesizwe ezixabisa i-45-65 yeedola ngeyure yomsebenzi. Ukufaka isinki, bahlala benikezela ngexabiso elimiselweyo, elijikeleze i-200 yeedola, oko kubandakanya abasebenzi kunye naziphi na izinto ezongezelelweyo ezifunekayo kufakelo.
Kodwa linda-avelaphi la manzi? Amathuba kukuba, isiqithi sakho sasekhitshini asixhathisi eludongeni, ke kuyakufuneka usebenze ngombhobho omtsha phantsi komgangatho.
Lindela ukuhlawula ingcali malunga ne- $ 500 yokufakwa kwale mibhobho mitsha kunye nesinki. Ewe kunjalo, iindleko zixhomekeke kukuqhelaniswa kunye nemeko yombhobho wamanzi wangoku.
Ukuqhuba umbhobho omtsha kunokufuna ukususwa ngokungagungqiyo komgangatho wakho kunye nokufakwa komhlaba, ke qiniseka ukubala iindleko zokutshintsha okanye ukulungisa kwiindleko zizonke zokufaka isink kwisiqithi sakho sasekhitshini.
Isiqithi eside sekhitshi esinendawo yokupheka kunye nesinki sinokuguqula ikhitshi elincinci eliseludongeni libe yintliziyo yekhaya lakho. Ifuna isiqithi esikhulu kakhulu-ubuncinci iinyawo ezilithoba.
Olona ncedo luphambili lokuseta kukuba awjongani nodonga xa usenza ukulungiselela, ukupheka, okanye ukuhlamba izitya. Qiniseka ukuba ucwangcisa igumbi elininzi malunga nendawo yokupheka- ubuncinci i-15 yendawo yasimahla macala omabini ilungile.
Kwiintsapho ezinabantwana kunye nekhitshi ejongene nomdlalo wokudlala okanye indawo yasekhaya, le inokuba yindlela elungileyo yokugcina iliso ebantwaneni ngelixa ufumana isidlo sangokuhlwa etafileni. Kuya kufuneka uncame indawo ephantsi kwekhawuntara ukulungiselela i-oveni.
Isiqithi siya kufuneka ukuba sibe ziimitha ezilithoba ubude. Qinisekisa ukuba i-oveni ifikeleleka ngokupheleleyo xa umnyango uvulwe ngokupheleleyo.
Isinki yokulungiselela yaziwa ngokuba yi-'bar emanzi 'okanye' isebe lokuzonwabisa '. Ubungakanani obuqhelekileyo besinki yokulungiselela buli-15-25 ubude, bu-15 ububanzi, kwaye zii-intshi ezintlanu ukuya kwezintandathu ubunzulu, ngoko ke incinci ngokubonakalayo kunesinki yekhitshi.
iikhabhathi ezimhlophe ezinegranite
Injongo yayo kukuhlamba imifuno, ukucoca izixhobo, kunye nokubonelela ngamanzi ngexesha lokupheka. Ukuba ucwangcisa ukusebenzisa isiqithi sakho sasekhitshini njengeyona ndawo iphambili yokulungiselela, isinki yokulungiselela ngumbono olungileyo. Bona Okuninzi iintlobo zeesinki zasekhitshini kweli phepha.
Ukubeka isinki kwi itheyibhile yekhitshi yangaphandle siqithi yindlela entle yokwandisa ukusetyenziswa okuphuma ngaphandle kwekhitshi lakho langaphandle.
Ungazigcinela uhambo oluya ngapha nangapha endlwini ngokuzisa konke ukulungiselela kwakho nokuhlamba ngaphandle. Abanye abantu bade bagcine iseti yesibini yezitya ngaphandle!
UKUYA isinki yendlu yasefama ijongeka intle naphi na. Indlu yasefama isinki iphuma kancinane esiqithini-ukunqanda ukubetheka esinqeni njengoko ujikeleze ikona, qiniseka ukuba ubuncinci ubuncinci be-intshi ezingama-36 zemvume phakathi kokungena kwesinki kunye ne-countertop okanye udonga olwahlukileyo.
Jonga igalari yethu ye iintlobo zeziqithi zasekhitshini kweli phepha ukufumana ezinye izimvo.
ishawa yethayile yeArabesque
Ufumana njani isihluzo se-snapchat somnyhadala
Ubungakanani obuqhelekileyo bekhethini lokuhlamba
Isipho seminyaka emi-2 sokukhumbula umfazi
amagama asetyenziswa kumakhadi ezipho endaweni yezipho